Faah faahin:- Dagaal deegaanka Juungal ku dhexmaray dagaalayahanada Al-shabaab iyo ciidanka Kenya - Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin:- Dagaal deegaanka Juungal ku dhexmaray dagaalayahanada Al-shabaab iyo ciidanka Kenya
Waxaa faah faahin dheeraad ah laga helayaa dagaal xoogan oo habeenkii xalay dhexmaray ciidamada Kenya ee AMISOM iyo kuwa Xarakada Al-shabaab, kaas oo muddo saacado ah ka socday deegaanka Juungal oo ku yaala duuleedka magaalada Baardheere ee gobolka Gedo.
Dagaalkaan oo ahaa mid aad u culus ayaa sidoo kale la sheegay inay ka qeyb qaateen diyaaradaha dagaalka, oo dhinaca cirka ka duqeeynayay goobaha ay ku sugnaayeen dagaalayahanadda Al-shabaab.
Ilaa iyo haatan lama oga qasaaraha dhabta ah ee ka dhashay dagaalkaasi, inkastoo warar hordhac ah aynu heleyno ay sheegayaan in labada dhinac uu soo kala gaaray qasaare aad u culus.
Sidoo kale, ma jiraan wax hadal ah oo kasoo kala baxay Al-shabaab iyo ciidamada Kenya, kaas oo ay kaga hadlayaan dagaalka xalay ku dhexmaray deegaanka Juungal ee duuleedka magaalada Baardheere ee gobolka Gedo.
Dhinaca kale, xaaladda goobihii lagu dagaalamay ee deegaanka Juungal ayaa la sheegayaa inay saakay tahay mid degan, inkastoo ay halkaasi ka jirto cabsi ay qabaan dadka shacabka ah in markale halkaasi lagu dagaalamo.
Si kastaba ha ahaatee, dagaalkaan ayaa kusoo beegmaya xilli todobaadyadda soo socda ay dalka ka bilaaban doonaan doorashooyinka, iyadoona dagaalyahanadda Al-shabaab ay mudooyinkii ugu dambeysay kordhiyeen dagaalada ay kula jiraan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM.